अर्थ::Best News Experience from Nepal
राष्ट्र बैंकले १० करोडको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार १० करोड रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने भएको छ । बैंकले बोलकबोलको प्रक्रियाबाट उक्त परिमाणको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्न लागिएको हो । कूल ९१ दिने अवधिका लागि बिक्री गर्न लागिएको ट्रेजरी बिल आगामी कात्तिक २६ गते परिपक्व हुनेछ ।- रासस ...
डेढ करोडको लागतमा क्याफे एण्ड बार’ सञ्चालनमा
यमलाल भुसाल बुटवल । बुटवल–११ कालिकानगर (होराइजन चोक नजिकै) ‘ब्ल्याक इन हवाइट क्याफे एण्ड बार’ सञ्चालनमा आएको छ । होटल तथा रेष्टुरेण्टको ‘हब’ का रूपमा विकास हुँदै गएको कालिकानगर क्षेत्रमा यहाँका चार जना युवाहरूको संयुक्त लगानीमा क्याफे सञ्चालनमा आएको हो । क्याफे एण्ड बारको आइतबार होटल तथा रेष्टुरेण्ट व्यवसायी संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष समुन्द्र जिसीले उद्घाटन गदै होटल तथा रेष्टुरेण्टहरु रातभर सञ्चालन हुनुपर्ने माग आफूहरूले प्रशासनमा पटक–पटक उठाएको बताउनु भयो । रुपन्देहीमा पर्यटकीय...
बुटवलमा मेयर सुबेदीद्धारा व्यवसायिक भवनको शिलान्यास
बुटवल । बुटवलको लुम्विनी बस टर्मिनल (बस पार्क) मा बन्न लागेको व्यवसायिक भवनको आज बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुबेदीले शिलान्यास गरेका छन् । व्यवसायिक भवनको ८करोड रुपैयाको लगानीमा एक वर्षमा निर्माण पुरा हुने लक्ष्य रहेको हो । त्यस अवसरमा बोल्दै नगर प्रमुख सुबेदीले बुटवलमा जनसंख्या र घर निर्माण बढेसंगै जग्गाको अभाव हुन थालेकाले ठूला व्यवसायिक भवन र आवास निर्माणका लागि नगरपालिकाले बीज्ञहरु मार्फत अध्ययन गरीरहेको बताए । उनले भने साना साना घर...
९१ लाख राजश्व सङ्कलन
पाल्पा । गत आर्थिक वर्षका पाल्पामा १५ हजार ४८ सवारी चालक कारवाहीमा परेका छन् । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पाल्पाका अनुसार आव २०७५/७६ मा कारवाहीमा परेका चालकबाट रु ९१ लाख १९ हजार ५०० राजश्व सङ्कलन भएको छ । कारवाहीमा परेकामध्ये सबैभन्दा बढी ट्रक र मिनी ट्रकका चालक रहेका छन् । सो अवधिमा कारवाहीमा परेका चार हजार २६७ ट्रक र मिनी ट्रकबाट २५ लाख ७२ हजार ५०० राजस्व सङ्कलन भएको जिल्ला ट्राफिक...
नाईस ग्रुपको लगानीमा खुल्यो हार्डवेयर्स प्रा.लि.
तिलोत्तमा । नाईस ग्रुपले करिव पाँच करोडको लगानीमा हार्डवेयर्स प्रा.लि. सञ्चालनमा ल्याएको छ । तिलोत्तमा नगरपालिका–५, मणिग्राम राधाकृष्ण टोलमा नाईस हार्डवेयर्स प्रा.लि. सञ्चालनमा आएको हो । प्रा.लि.को मंगलबार तिलोत्तमा चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष जेपि कंडेलले उदघाटन गरे । त्यस अवसरमा बोल्दै उनले व्यवसायमार्फत स्वरोजगार बन्नु सबैभन्दा ठूलो कुरा भएको भन्दै व्यावसायिक प्रतिष्पर्धाका बीच उपभोक्तालाई सहज सेवा प्रदान गर्न प्रा.लि.लाई आग्रह गरे । नौ जना व्यवसायीहरुको लगानीमा उक्त हार्डवेयर्स प्रा.लि. सञ्चालनमा ल्याइएको...
दूरसञ्चारमा नेपाल टेलिकमको वर्चस्व
काठमाडौँ । दुई ठूला दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेलबीच ग्राहक संख्याको अन्तर दिनहुँ बढ्दै गएको छ । छ वर्षअघिसम्म आक्रामक योजनाका साथमा अगाडि रहेको एनसेल पछिल्लो समय स्वामित्व परिवर्तनसँगै आन्तरिक समस्यामा परेपछि सरकारी स्वामित्वको कम्पनी टेलिकमको ग्राहक संख्या भने उत्साहजनक रुपमा बढेको छ । नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको म्यानेजमेन्ट इन्फमेसन सिस्टम ९एमआईएस० अनुसार दुई कम्पनीबीचको अन्तर ५८ लाख नाघेको छ । यो अन्तर...
तिलोत्तमा लगानी सम्मेलन
यमलाल भुसाल बुटवल । तिलोत्तमा नगरपालिकाले आगामी असोज ९ गते देखि आयोजना गर्ने लगानी सम्मेलनमा कृर्षि ,पर्यटन र उद्योगलाई आधार बनाएर लगानी भित्र्याउने लक्ष्य अगाडी बढाएको जनाएको छ । दुई दिन सम्म संचालन हुने लगानी सम्मेलनमा ५० विदेशी र २ सय स्वदेशी गरी २ सय ५० जना लगानी कर्तालाई सहभागी बनाउने तयारी भैरहेको तिलोत्तमा नगरपालिकाका मेयर बासुदेव घिमिरेले बताउनु भयो । होटल तथा रेष्टुरेण्ट व्यवसायी संघ रुपन्देहीले आईतबार मणिग्राममा आयोजना गरेको नेपाल...
१३४ देशसँग व्यापार घाटा
काठमाडौँ । मुलुकले गएको वर्ष १ सय ५७ वटा देशसँग व्यापार गरेकोमा १ सय ३४ वटा देशसँगको व्यापारमा घाटा भएको छ । यद्यपि, न्यून परिमाणमा व्यापार हुने अन्य २३ मुलुकसँग भने नेपालको व्यापार नाफामा रहेको छ । व्यापार नाफामा रहेका देशमा दक्षिण एसियाली देश अफगानिस्तानदेखि न्यू क्यालेडोनियासम्म रहेका छन् । मुलुकले कम सामान आयात गरेर धेरै निर्यात गरेका २३ वटा देश रहेका छन् । व्यापारमा नाफा रहेका देशहरूमा आर्मेनिया, काजकस्तान, यमन, बाहमाज,...
असारसँगै विकासका काम सुरु हुँदा बजेट फ्रिज
रोल्पा । जनप्रतिनिधिले विकास र समृद्धिको बिकाउ नारा बोकेर हिँडे पनि वर्षेनी समयमै काम नुहँदा बजेट फ्रिज हुने गरेको छ । असारे विकासबाट कर्मचारी मात्रै होइन, जनप्रतिनिधि प्रभावित हुन थालेका छन् । असारसँगै विकासका काम सुरु हुँदा बजेट फ्रिज हुने गरेको हो । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा रोल्पामा चालू र पुँजीगत गरी जम्मा चार अर्ब ८७ करोड २१ लाख ५४ हजार रकम विनियोजन भएको थियो । कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय रोल्पाका अनुसार वर्षभरमा...
विकास बजेट काम नगरी फिर्ता
पाल्पा। गत आर्थिक वर्षमा कालीगण्डकी करिडोर निर्माणमा आएको १ अर्ब ५० करोड ७१ लाख बजेटमध्ये २८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च हुन सकेन । सडक डिभिजन कार्यालयमा ३८ करोड ८७ लाख बजेट आए पनि ५ करोड ४१ लाख फिर्ता भयो । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयमा आएको २१ करोड ८५ लाखमा ६ करोड ६६ लाख खर्च हुनै सकेन । पुल योजना पश्चिम को ५० करोड बजेटमा ४६ करोड ७२ लाख मात्र खर्च भएको...